Kitra – «Poule des As 2018»: hangotraka ny lalao amin’ny andro fahadimy | NewsMada
Kitra – «Poule des As 2018»: hangotraka ny lalao amin’ny andro fahadimy
Hitohy indray ny fifaninanam-pirenena, taranja baolina kitra, taorian’ny fifaninanana natrehin’ny Barea de Madagascar, farany teo iny. Hiditra amin’ny andro fahadimy ny “Poule des As”. Hanana ny lanjany ireo fihaonana roa, amin’izany.
Hotanterahina, amin’ny alahady ho avy izao, ny andro mialoha ny farany, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “Poule des As 2018”. Hangotraka ireo lalao roa, hanamarika ity andro fahadimy ity. Any amin’ny kianja Vélodrome Antsirabe, hampiantrano ny Cnaps Sport Itasy ny FC Vakinankaratra.
Hatreto, tsy mbola resy teo amin’ny kianjany ny ekipan’Antsirabe, teo amin’ity fiadiana ny “Poule des As” ity. Manana isa 4 ny FCV raha 7 kosa ny an’ny ekipan’Itasy. Tsy maintsy hiady hanao izay ho afany ny FCV, hakana isa 3 indray. Etsy ankilany, mila fandresena ihany koa ny Cnaps Sport, raha te hiandrandra ny ho tompondaka. Hiendrika famaranana kely, araka izany, ity lalao ity.
Raha an-taratasy, mandresy ny Cnaps Sport, saingy tombony ho an’ny FCV ny hilalao eo amin’ny kianja efa mahazatra azy sy manoloana ireo mpomba ny ekipa. Hanala vela rahateo ry zalahy satria efa resin’ny Cnaps Sport, tamin’ny isa 3 no ho 1, nandritra ny fihaonana mandroso, tany amin’ny kianja Vontovorona.
Any amin’ny kianja Rabemananjara indray ny lalaon’ny Fosa Jr sy ny Elgeco Plus Analamanga. Hanana ny lanjany ihany koa ity fihaonana ity satria mety hamaritra ny hoavin’ny Fosa Jr, mitarika vonjimaika ankehitriny, amin’ny fananany isa 10. Tsy manana herijika ny ho tompondaka intsony kosa ny Elgeco Plus satria isa tokana ihany ny azy ireo, hatreto. Na izany aza, tsy maintsy hiaro ny voninahiny ity ekipan’Analamanga ity. Raha tsiahivina, nisaraka ady sahala samy tsy nisy nitoko ny andaniny sy ny ankilany, teo amin’ny lalao voalohany, notanterahina tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Ity izany no tsontsori-mamba hisarahana.